Kuwedzera kushomeka kwemabasa: chii uye chii zvinodiwa uye maitiro | Ehupfumi Zvemari
Fungidzira kuti hauna basa. Neraki, iwe unoshaiwa basa, kusashanda, izvo zvinokutendera kuti usanyanye kukundikana pakupera kwemwedzi nekuti mari inouya mumba. Nekudaro, iwe une chirongwa chaungade kutanga, uye chinhu chete chaunoshaya imari. Saka wadii kuisa mari pakubata basa?
Pfungwa iyi isinganzwisisike iri kuramba ichishandiswa nevazhinji vasingashande vanofunga kuisa mari yekubhadhara mukugadzira kambani kana bhizinesi kuti vawane mari yakawanda asi, Zvinorevei kupa capitalization kusashanda kunoreva? Zvingaitwe sei? Ndezvipi zvazvakanakira nezvazvinogona? Zvese izvi uye zvimwe zvakawanda ndizvo zvatichataura nezvazvo pazasi.
1 Chii chiri kuwedzera kushaya basa
2 Ndiani anogona kukumbira kuti awedzere kushaya basa
3 Makomborero ekuwedzera kushomeka kwemabasa
4 Mhando dzemari
5 Maitiro ekuwedzera pane kushaya basa
Chii chiri kuwedzera kushaya basa
Kuwedzera kushomeka kwemabasa kunozivikanwa se kubhadharira-nguva imwechete kana kusanganisa kushaya basa. Iyi tsika inoenderana nekuti vanhu vanounganidza rubatsiro rwekusashanda, uye vanoda kutanga chiitiko vega, vanogona kukumbira kuti vabhadharwe, munguva imwe chete, zvese kana chikamu chemubatsiro wekusara nemabasa icho chinosara kutorwa.
Mune mamwe mazwi, iyo SEPE kufambisira mberi mari yekushaikwa kwemabasa inosara kugamuchirwa mubhadharo mumwe chete, nenzira yekuti mari inowanikwa inowanikwa iyo inofanira kushandiswa kutanga bhizinesi rinotangwa.
Kubva pane iyi dudziro, iwe unofanirwa kujekesa akati wandei mapoinzi:
Kuti iwe unofanirwa kunyoresa semunhu anozvishandira. Muchokwadi, kutora mari pamusoro pekushaiwa basa kunoreva kuti uri kuzotanga rako wega bhizinesi, uye nekuda kweizvi unofanirwa kunyoreswa neRETA (Special Regime yeVanozvishandira Vashandi). Imwe sarudzo ndeyekuti iwe uri nhengo yemubatanidzwa wakashomeka kana mushandi anoshanda, kungave mushandirapamwe kana mubatanidzwa wevashandi.
Kuti uyu muripo wenguva imwe chete unofanirwa kushandiswa kuisa mari mubhizinesi (kuva neimwe nzira guta guru rekambani iyoyo).
Ndiani anogona kukumbira kuti awedzere kushaya basa
Zviripachena, vanhu vanogona kukumbira kuti vawane mari pakusashanda ndevaya vari kuwana mabhenefiti ekushaya basa (ndiko kuti, vari kutora mabhenefiti ekushaikwa kwemabasa). Nekudaro, uyu mushandi wekushomeka haufanire kuvhiringidzwa nerovha yebatsiro. Mune ino kesi, iwe unogona chete kuiwedzera iyo kana iwe ukawana iyo yemubatsiro bhenefiti.
Uye zvakare, imwe nhevedzano ye zvinodiwa pane chikamu chemunhu ari kuchikumbira, senge:
Kuti iyo nguva yebhenefiti ingangoita mwedzi mitatu kubva kuchikumbiro chako.
Kwete kunyoreswa neSocial Security.
Pasina kubatsirwa nemubhadharo mumwe chete zvisati zvaitika (vanoisa muganho wemakore mana, ndiko kuti, makore mana ega iwe waiuwana).
Ratidza kuti iwe wakanyoreswa semunhu anozvishandira kana seunoshanda naye.
Asina kukwikwidza kudzingwa. Kana iwe uine, hauzokwanise kushandisa mari pakuramwa kusvikira dambudziko ragadziriswa.
Makomborero ekuwedzera kushomeka kwemabasa
Izvozvi zvawave kuziva kuti chii kubhadharisa kubhadhara, kuita sarudzo yekuzviita kana kwete zvinoenderana nezvinhu zvakawanda, pamwe nemamiriro ezvinhu aunozviwana uri.
Nekudaro, pakati pezvakanaka zvekutsiva mari ndeizvi:
Simba rekuunganidza zvese kamwechete. Nenzira iyi, haufanire kumirira kuti uwane mari uye ugone kuita zvirongwa zvauinazvo, asi ivo vanokuisira mari yekusashanda kuitira kuti ugone kuenderera nekukurumidza. Ehezve, yeuka kuti kana changokumbirwa, hazvisi izvo nekukurumidza, asi mwedzi unopfuura.
Unogona kusarudza kuti ungaigamuchira sei. Ndokureva kuti, gamuchira zvese kamwechete kana pamwedzi (nokudaro uchideredza mitengo yemubhadharo wemupiro).
Zvese zvakanaka zvine zvimwe "zvishoma zvakanaka" maficha, uye mune ino nyaya isu tiri kutaura nezvayo:
Shandisa kodzero yekubatsirwa. Kuti uwane mari pamusoro pekushaya basa, iwe unoda chirongwa uye uzviitire wega kuzvimiririra; Izvi zvinoreva kuti uri kuzodya zvavanokupa sebhenefiti mubhizinesi rinogona kubudirira, kana iro rinogona kupedza mari yawakafambira mberi (uye kusara usina chinhu).
Kune rusarura. Ndine urombo, asi ndizvo zvazviri. Varume vari pasi pemakore makumi matatu ekuberekwa, uye vakadzi kusvika pamakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa, vanogona kuwedzera 30% yekushaikwa kwemabasa, asi kupfuura zera irori vanogona kungoita kushaya mabasa ne35%, neasara makumi mana ari ekushandisa mupiro wekushaya basa.
Quota subsidies yarasika. Izvi zvinodaro nekuti, kana iwe ukakanganisa muchikumbiro, iwe unobhadhara iko kukanganisa nekurasikirwa ne40% yerubatsiro inoenderana newe.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kufunga nezvacho ndechenzvimbo yekushomeka, nekuti zvinogona kuitwa nenzira mbiri dzakasiyana:
Wedzera 100%, ndiko kuti, gashira mari yese irikushaikwa kubva kubhenefiti rubatsiro kamwechete kuti ubhadhare mari inodiwa nebhizinesi.
Chengetedza pamwedzi kubhadhara. Mari iyi inozoshandiswa kubhadhara muripo wevanozvishandira, nenzira yekuti chikamu chekushaiwa kwako basa chinoshandiswa kubhadhara mari yemwedzi wega yevanoshanda vega uye zvimwe zvinokwanisika.
Maitiro ekuwedzera pane kushaya basa
Kana mushure mekuverenga zvese, nekuzvizivisa pachako, wafunga kuwedzera mari pamabasa, unofanirwa kuziva matanho aunofanira kutora kuti uite saizvozvo. Mune ino kesi, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuenda kuHurumende Public Employment Service, ndiko kuti, SEPE. Enda kuhofisi inoenderana newe (nguva dzose nekugadzwa kuitira kuti vakwanise kuenda kwauri vasina kukuita kuti umirire kwenguva refu).
Ivo vachakuzivisa iwe nezve iyo imwechete kubhadhara uye, kana ivo vakaona kuti iwe wasarudzwa, iwe uchafanirwa zadza chikumbiro, uchibatanidza mushumo wechiitiko chauri kuzokudziridza, pamwe nekudyara kwauchasangana nako. Ehe, rangarira kuti mari yaunoisa inofanira kunge isina VAT, nekuti VAT haigone kupihwa rubatsiro.
Chinhu chakaomesesa kwauri kungave kugadzirira mushumo weprojekiti, asi paInternet unogona kuwana akawanda maMatemplate eShoko ayo achakubatsira iwe kuzviita nyore. Kana, kana iwe usingazive, kana usingade kukanganisa, unogona kugara Kumbira rubatsiro kubva kumaneja kana chipangamazano kuti uigadzirire zvinoenderana nezvavanokumbira.
Paunenge iwe waendesa zvese, kuwedzera kune humbowo hwekuti iwe wakanyoreswa semunhu anozvishandira, mwedzi unotevera ivo vanokupa mari, kana zvese zvanaka, iyo-yenguva-imwe yekushaya basa kubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Wedzera kushaya basa
Musiyano uripo pakati peVisa neMastercard